Vector Magic wuxuu kaa caawinayaa inaad xawaareyso bitmaps-kaaga daqiiqad gudaheed | Abuurista khadka tooska ah
Sahaminta sawirada waxay noqon kartaa madax xanuun waxayna nagu qasbeysaa inaan waqti galino waqti ka badan inta aan heysano. Guud ahaan, markaan ka shaqeyno mashaariicda aan u baahan nahay inaan galno astaamaha shirkadaha ay la shaqeeyaan macaamiisheenna, waxaan inta badan ku lifaaqnaa feylal istimaala (JPEGs, GIFs, PNGs…) tayo aad u hooseeya. Marka laga hadlayo shirkadaha loo aqoonsan yahay qaran ahaan ama caalami ahaan, ma ahan wax culus, maxaa yeelay waxaan ka heli karnaa astaantooda shabakadda qaab fudud. Laakiin markay tahay SMEs ama shirkado yaryar oo gudaha uun laga yaqaan oo aan macluumaad badan oo iyaga ku saabsan laga helin shabakadda, markaa helitaanka beddelaad leh tayo ku filan way yara adkaan kartaa. Waxay ku jirtaa kiisaskan, taas oo ah inaan u beddelno faylasha macaamiisheenna vectors-ka la qaadi karo si loo ilaaliyo qeexitaanka wanaagsan oo galiya feylashaan mashruucii ugu dambeeyay. Ikhtiyaar kale ma lihin oo aan ka dhigno in qalinkeennu muujiyo Sawirka oo aan shaqo tagno.
Si kastaba ha noqotee, internetka waxaa jira waxyaabo kale oo aad u xiiso badan oo naga caawiya inaan badbaadino waqtigan oo aan shaqada u qabanno. Sixirka Vector waa mid ka mid ah codsiyadaas, waana ku mahadsan tahay iyada iyo nidaamkeeda baafinta otomaatiga ah waxaan awoodi doonnaa inaan helno natiijooyin wanaagsan oo ku filan si aan toos ugula shaqeyno faylalkayaga. Intaas waxaa sii dheer, codsigan wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka saarno asalka iyo sidoo kale inaan u keydinno qaabka PNG, oo leh aagag ay ku jiraan daahfurnaan, kuwaas oo faa'iido badan u yeelan kara dhowr jeer.
Iyo… Xagee ka heli kartaa codsigan cajiibka ah? Haddii aad gasho tiisa bogga rasmiga ah waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sixirka Vector: Vectorize sawiradaada waqti rikoor ah